မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 03/01/2008 - 04/01/2008
ဒီ music video လေးနဲ့ ဒီသီချင်းလေးက ကျမကို ရှေ့ဆက်ဖို့အားပေးနေတယ်... လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ပတ်လောက်က သူ့ကိုပြောချင်ခဲ့တဲ့ (တချို့စကားတွေလဲပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့) ဗေဒါဘလောက်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကရေးချင်ခဲ့ပေမဲ့ ရေးဖို့အားမရှိခဲ့တဲ့အတွက် မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေ အစား... ခု recovery ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်စကားလုံးတွေကို ခံစားပေးပါ.. နောင်တချိန် fully recover ဖြစ်သွားရင်.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ပတ်က ခံစားချက်ကို ရင်တွင်းဖြစ် စကားလုံးစစ်စစ်တွေနဲ့ ဖော်ပြပေးပါ့မယ်...
MV လုပ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ခုကျမရဲ့ခံစားချက် တထပ်ထဲကျတဲ့အတွက် သီချင်း အဓိပ္မါယ်ကို သေချာနာလည်ပြီး.. MV ထဲကစာတန်းလေးတွေကိုလဲ ဂရုတစိုက်ဖတ်သွားစေချင်တယ်....
ချစ်သူတဖြစ်လဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အချစ်ဟောင်းရေ...../
ဒုတိယနေရာကို ရောက်မှန်းမသိရောက်ခဲ့ရတဲ့ ငါ့အဖြစ်ကို ခုချိန်ကစပြီးမသနားတော့ဘူး... သင်ခန်းစာပဲယူတော့မယ်... နင့်ချစ်သူအပေါ် သစ္စာရှိနိုင်ပါစေ.... နောက်ထပ် မိန်းကလေးတွေကို ငါ့လိုမခံစားရပါစေနဲ့ဟာ...
ိငါကတော့ နင့်ကို ချစ်ခဲ့တဲ့ စစ်မှန် သစ္စာရှိတဲ့ ငါ့အချစ် အတွက်အမြဲ ခေါင်းမော်နိုင်ပါတယ်... ငါ့အချစ်တွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နောက်လူတွေ့ရင်လဲ ငါ ဒီလိုပဲ ယုံကြည်ချစ်အုံးမှာပဲ.... ငါ့ကို တုံးတယ်ပဲပြောပြော အရူးပဲဆိုဆို အချစ်စစ်ဆိုတာ ရှိတယ်ဆိုတာကိုငါ ယုံကြည်ထားတုံးပဲ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူထဲကလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ငါ့မှာတောင် ဒီလိုအချစ်မျိုးရှိသေးတာ... ငါ့လိုလူမျိုးနဲု့ ငါမတွေ့သေးလို့ပါ... ဒါပေမဲ့ ငါလိုက်တော့ရှာနေမှာမဟုတ်ဘူး...
အချစ်စစ်ဆိုတာ back up မရှိဘူး.. နီးတာဝေးတာမရှိဘူး.... တွေဝေမှုမရှိဘူး... နင်အဲဒိလို အချစ်မျိုးမခံစားဖူးမှန်း သိရတော့ ငါနင့်ကိုသနားတယ်.. နင့်နေရာမှာ တစ်ခြားအရာတွေကိုအစားထိုးပျော်တတ်တဲ့ နင့်ရဲ့ချစ်သူကို နင်မခံချင်လို့ပဲဖြစ်စေ... ငါ့ကိုအစားထိုးပြီးပဲ ဖြစ်စေ.. ငါနင့်ကိုချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်အတွက် ငါကျေနပ်တယ်.. အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ငါခံစားပြီးမှတော့... အသဲကွဲတယ်ဆိုတာကြီးကိုလဲ ငါခံစားရတာမဆန်းပါဘူး... ငါဟာ နင့်အတွက် ဒုတိယနေရာကဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ နင့်ကိုချစ်တဲ့နေရာမှာတော့ ငါ့ကိုဘယ်သူ့မှနိုင်မယ်မထင်ဘူး... အဲဒိအတွက်ငါက ဒုတိယနေရာက ပထမလူအဖြစ် ငါ့ကိုယ်ငါခံယူတယ်... ရည်းစား၂ယောက် ၁ပြိုင်ထဲထားပြီး နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ နှစ်သိမ့်တဲ့စကားအတွက်ကျေးဇူးပဲ.. ဒါပေမဲ့ ငါ့အတွက်တော့ မလိုအပ်တော့ပါဘူး.... သားရဲ့ရည်းစား ၂ယောက်လုံးကို ဘာမှမဖြစ်သလို ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ နင့်မိဘတွေလိုမိဘမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလဲ ခုမှပဲကြုံဖူးတော့တယ်.. နားလည်မလားတော့မသိဘူး ပြောပြချင်တယ်.. နားမလည်လဲ မှတ်ထားလိုက်.. "ကိုယ့်သားသမီးမှ သားမဟုတ်ဘူး... သူများလဲ သွေးနဲ့မွေးထားတဲ့ သားသမီးပဲ.. ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားမလည်ရင်တောင် သုံးဖူးကြားဖူးမှာပါ"... အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး... မသိသေးဘူးထင်လို့ပြောပြတာပါ.. ငါကတော့ အသဲကွဲရုံအပြင် သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရသွားတဲ့အတွက်... ဒီ relationship ကတန်ပါတယ်.. ငါခံစားလိုက်ရပေမဲ့ "အချစ်စစ်"ကိုလဲမယုံဘူး..ငါလဲကြုံရာကိုအစားထိုးလိုက်မယ်တော့မထင်နဲ့.. ဒီသင်ခန်းစာအတွက် "အချစ် သစ္စာနဲ့ ယုံကြည်နားလည်မှု ကတိ မျှော်လင့်ချက် သတ္တိ စွန့်လွှတ်ခြင်း" စတာတွေကို ငါပိုတန်ဖိုးထားလာတယ်.. ငါ့မှာရှိနေတဲ့ အဲဒါတွေကိုလဲ တန်ဖိုးပိုမြှင့်ပြီး ထိမ်းသိမ်းသွားမယ်...
တချိန်တနေ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရင်တောင် ငါနင့်ကို ခေါင်းမော်ပြီး ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ ငါယုံတယ်... အဆိုး၁ခုထဲက အကောင်းတွေအများကြီး ငါရခဲ့တဲ့အတွက် မဗေဒါတို့ကတော့ ပန်းပန်လျက်ပဲလို့............
Posted by mabaydar at 8:28 AM7comments :
Posted by mabaydar at 8:29 PM2comments :
Posted by mabaydar at 3:25 AM6comments :
ရှက်တတ်ရင်လဲသေဖို့ကောင်းတဲ့ ခိုးချထားသော မြန်မာဇာတ်လမ်းများ (၁)
မပြောချင်လို့ ငြိမ်နေတာကြာပါပြီ... မြင်မိတိုင်း ကြည့်မိတိုင်း သိမိလိုက်တိုင်းလဲ ဒေါသစိတ် ရှက်စိတ် အားမလိုအားမရစိတ် သနားစိတ် မခံချင်စိတ် ဝေဖန်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာအောင်လဲ သူတို့လုပ်နိုင်တယ်.. သူတို့ဆိုတာ ဘယ်သူရှိမလဲ မြန်မာပြည်က ရုပ်ရှင်လောက ကလူတွေပေါ့..
ဒီလောက်ရသစုံပေးနိုင်လို့ သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေ သိပ်ကောင်းလို့နေမှာလို့ မထင်လိုက်နဲ့နော်.. တကယ်တန်းတော့ သူတို့ရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမရှိတဲ့ အနုပညာနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေကို မမှီပဲခိုးချပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို စော်ကားနေတာ အဆိုတော်ကြက်ဖ ဆိုတဲ့သီချင်းလို "ရှက်တတ်ရင်လဲသေဖို့တောင်ကောင်းပါတယ်"
စာရေးဖို့ပျင်းနေတဲ့ကျမကို ဝေဖန်ရေးတွေ ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာအောင် တွန်းအားပေးလိုက်ပုံကတော့ ဒီလိုပေါ့...
ရုပ်ရှင်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံက ကားပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းရင် ကျမကြိုက်တယ်.. ဒီတော့ ကိုရီးယား ဂျပန် တရုတ် အန္ဒိယ အင်္ဂလိပ် စသည်ဖြင့် လက်လှမ်းမှီသလိုကျမကြည့်တယ်.. ကောင်းတာလေးတွေဆိုရင်လဲ ဝေမျှချင်တယ်.. အရင်ကတော့ မြန်မာကားတွေလဲကြည့်တယ်.. တခါတလေ panesula plaza ကနေကို $3 ပေးပြီးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျမရဲ့ $3 နဲ့ cityhall အသွားအပြန်လမ်းစရိတ်သာကုန်တယ်.. နောက်ဆုံး ရလိုက်တဲ့ ရသကတော့ ဒေါသ နဲ့ နောင်တပါပဲ..
ဒီလိုနဲ့မြန်မာကားတွေနဲ့ကျမ အဆက်ပျက်နေခဲ့တယ်.. burmeseclassic မှာ free ကြည့်လို့ရတာတောင် ပေးရမဲ့အချိန်ရယ် ကြည့်ပြီးရမဲ့ အကုသိုလ်ရယ်နဲ့ မတန်လို့ မကြည့်ဖြစ်တာကြာပါပြီ..
ဒါပေမဲ့ တစ်ရက် အလုပ်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဘေးမှာ burmeseclassic ကနေ ရုပ်ရှင်ဖွင့်ကြည့်တော့ ကြုံလို့တစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်..
ကြည့်နေတဲ့ကားက "မာယာသော့ချက်"တဲ့.. သူထူးစံ နဲ့ မယ်လိုဒီ(တုံးတယ်ပဲပြောပြော တစ်ခါမှမကြားဘူးသော မင်းသမီးသစ်) .. ကားစလာထဲက လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေရော နေဆန်းရော သူထူးစံရော naturalမဟုတ် သရုပ်ဆောင်နေမှန်းသိသာတဲ့ အမူအရာ တွေနဲ့ဘာတွေပြောနေကြမှန်းတော့မသိ.. နောက်တော့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ မယ်လိုဒီ က သီချင်းတွေအကြာကြီးဆိုနေတာကို သူထူးစံကထိုင်ကြည့်တာတွေ့တယ်.. အဲ... ခဏလဲနေရော ဘယ်သူတွေနဲ့မှန်းမသိ ပြစ်ကြခက်ကြရော.. နောက်တော့ သူထူးစံ အောက်စိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့ ကျည်က ဘယ်လိုကဘယ်လို မယ်လိုဒီ မျက်လုံးကို ရှက်ထိသွားလဲတော့ ကျမလဲမသိတော့.. မယ်လိုဒီမျက်စိကန်းရော.................. ကဲ...... ဒီဇာတ်လမ်းက ရုပ်ရှင်အစပိုင်း5mins လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျမသိလိုက်ပါပြီ.. အထင်လဲသေးတယ်.. ရှက်လဲရှက်တယ်.. စာဖတ်ပရိတ်သတ်ထဲမှာလဲ မူရင်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖူးတယ်ဆို ဒီလောက်ဇာတ်လမ်းသိရင် original ဘယ်ကားလဲ ခန့်မှန်းလို့ရမှာပါ...
ဟောင်ကောင် ကနေ hollywood မင်းသားဖြစ်သွားတဲ့ မင်းသားကြီး "Chow Yun-Fat" (starred in Curse of golden flower, The bullet Proof monk, etc.) ရဲ့ "The Killer" ဆိုတဲ့ကားကို တိုက်ရိုက်ခိုးချထားတာပါ... စိတ်ပျက်လွန်းလို့ ထအော်မိတယ်.. "ဖားတုလို့ ခရုခုန် အိုင်ပျက်ရုံသာရှိတော့မပေါ့" ... ဟင်း.. ဒီလိုပြောရအောင်လဲ သူတို့တုလို့မရဘူးဆိုတာလဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ... လုံးဝ အသစ်အဆန်းကို ထွင်နိုင်တဲ့ idea မရှိတော့ လွယ်လွယ်ပဲ အာဒ္နိနဒါနာကံကို ကျူးလွန်ကြတယ်ထင်ပါ့....
သူတို့အပြစ်ကြီးပဲတော့ လုံးလုံးမပြောလိုပါဘူး... မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအဖွဲ့ချုပ်က တစ်လမှာ မြန်မာကား ဘယ်နှစ်ခွေ မရိုက်မနေရ ရိုက်ရမယ်.. ဒါ့အပြင် censor ခွင့်ပြုချက်မှာကျ ဟိုဇာတ်လမ်းမရ ဒီလို မပြောရ ဟိုလိုမလုပ်ရ .. မြန်မာပြည်မှာဆင်းရဲသားမရှိလို့ အရမ်းမွဲတေနေတဲ့ ဆင်းရဲသားကားမရိုက်ရဆိုပဲ(ကြားတာပဲ ဟုတ်မဟုတ် အာမ မခံ).. ဒါပေမဲ့ ခိုးကူးခွေကျတော့ ထိထိရောက်ရောက်အရေးမယူပေး... COPY RIGHT RULE ဆိုတာကမရှိ.. သူတို့လဲ ဘယ်ကြိုးစားချင်မလဲ.. ဒါကသူတို့ဖက်က စဉ်းစားကြည့်ပေးတာ...
အဲ.... ခိုးကူးဆိုလို့ ကျမကိုယ်တိုင်လဲ ကြုံရင်တော့ ခိုးကူးပဲဝယ်တာပဲ.... ဒါကလဲ customer right ပဲ.. ဈေးပေါတာပဲဝယ်မှာ.. သူတို့ ကြိုးစားမှုကလဲ ဒီလောက်ပဲတန်တာ.. ခိုးကူးခွေကြောင့်သာဆိုရင် နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေလဲ အသစ်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ internet မှာ download လုပ်လို့ရပြီ.. streaming website တွေမှာ free ကြည့်လို့ရတယ်.. ဒါဆို သူတို့ဘာလို့ မြတ်နေသေးတာလဲ? ဒီနေရာမှာ QUALITY စကားပြောပြီ.. အနုပညာကိုပြောင်မြောက်အောင်တင်ဆပ်နိုင်ရင် ပရိတ်သတ်ကလဲ တန်ရာတန်ကျေးပေးကြည့်မယ်လို့ ကျမယုံကြည်တယ်
ခုလိုရေးရတာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုအထင်သေးပြီး သူများနိုင်ငံကိုအထင်ကြီးနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူး... ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒပါ.. လူ လူချင်းတူတူ သူတို့တွေးနိုင်လုပ်နိုင်ရင် ကိုယ်လဲလုပ်နိုင်ရမယ်... copy ကူးမယ်ဆိုလဲ သူတို့ထက်မကောင်းတောင် သူတို့လောက်တော့မှီအောင်လုပ်ပေါ့.. ကိုယ်ကနောက်မှလုပ်တဲ့သူပဲ ဒိထက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အခွင့်ရေးရှိတယ်.. ထွက်ပြီးသားမူရင်းက ပြန်ပြင်ဖို့ အခွင့်ရေးမရှိတော့ဘူး... ကူးချရင်လဲ ကူးချတဲ့အလျှောက်မာန်လေးတော့ရှိကြစမ်းပါ...
ငါတို့နိုင်ငံကတော့ သူတို့ကိုဘယ်ယှဉ်လို့ရပါ့မလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကမခိုင်လုံဘူး... ခုဆို ASIA က သရဲကားတော်တော်များများကို HOLLYWOOD ကပြန်ကူးချပြီးတောင်ရိုက်နေရပြီ...
The ring(japan), One miss called(japan), the eye(HK),Shutter(Thailand)... ကားတွေကို US ကတောင် remake ပြန်လုပ်နေရပြီ.. Thailand ဆိုတာလဲ မြန်မာပြည်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းနိုင်ငံပါ.. သူတို့တွေလုပ်နိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာက Chow Yun-Fat ရဲ့ ရှေးပဝေသဏီက ကားကိုကူးချတာမမှီဘူးဆိုတော့... တကယ်ပါ... မြန်မာ့အနုပညာကို ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူ... ခင်ဗျားတို့အားလုံး.. ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတော့တယ်....
တိုက်ရိုက်ခိုးချထားသော မြန်မာ ဗွီဒီယိုများကို ထပ်၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါသည်.. နောက်ပိုစ့်များတွင်တစ်ခုချင်းဝေဖန်သွားပါမည်.. စာဖတ်သူများ ကြုံကြိုက်၍တွေ့ရှိသော ဇာတ်လမ်းများနာမည်နဲ့ မူရင်းဇာတ်လမ်းနာမည်/နိုင်ငံ ကိုလဲ comment မှာဝေငှသွားနိုင်ပါတယ်.. ကျမကမြန်မာကားသိတ်မကြည့်ဖြစ်လို့ပါ..
လောလောဆယ်ကျမသိသလောက်မြန်မာကားခေါင်းစဉ်လေးတွေအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါ့မယ်.. original ဘယ်ကားတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေသိရင် comment လေးမှာဖြေခဲ့နော်.. နောက်ပိုစ့်တွေကျရင်အဖြေပြောပြမယ်..
တစ္ဆေတစ်ကောင်၏အငြိုး.. ဝေလုကျော် + သဇင်
အချစ်မှာအပြစ်မရှိပါ........ လွင်မိုး + ထွန်းအိန္ဒြာဗို
ဝိဥာဏ်လိပ်ပြာ ....... လူမင်း + အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ဆယ်လူလာ …............ လူမင်း + မို့မို့မြင့်အောင်
နေကြတ်ချိန်............... နေတိုး + စိုးပြည့်သဇင်
(မှတ်ချက်.. ဤပိုစ့်ကို မည်သူ့ကိုမှထိခိုက်စေလို၍ရေးခြင်းမဟုတ်.. ကျမ၏ထင်မြင်ချက်ကို ဥာဏ်မှီသလောက်ဖွင့်ဟထားသောကြောင့် လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲနိုင်သည်)
Posted by mabaydar at 7:47 AM 11 comments :